My klas bụ a mpempe ochie m ụmụ klas klas na m nwere mgbe m gara na Torpa akwụkwọ. Ha biri n'etiti ụlọ akwụkwọ dị elu ụlọ mgbe m bịara na n'ụzọ nkịtị na a n'akụkụ nke oblong ụlọ. Iji nweta ochie klas, m ga-aga gara ọkara na ogologo paseji na mgbe n'aka-nri. Ọ mere na na m mere ya mere mgbe ụfọdụ.
N'otu oge, m zutere Christian, ọ bụ Ihọd na m mere n'ime a agha na ụlọ akwụkwọ égbè, ọtụtụ afọ tupu mgbe. M na-adịghị echeta ihe anyị na-ekwu banyere ma ọ bụ n'ụzọ udo. Mains anyị na-ekwu na e nwere ndị n'etiti ìgwè mmadụ nke ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ na ezumike na oche, ụlọ akwụkwọ igbe na Jaketị ga na mberede a girl bịakwutere m na-ekwu, sị:
"Ọ bụghị gị ọ bụla ịsa n'ụlọ otú i nwere ike asa gị kegriiz ntutu?"
Akpata oyi wụrụ m na-amaghị ihe na-ekwu, na dị nnọọ jụụ. Christian amaghị ihe ọ ga-asị mgbe ọ gbalịrị ochi weturu anya. Ebe ọ bụ na nwa agbọghọ ahụ kwetara. M na-amaghị onye ọ bụ, ma, ọ bụ nnọọ na-egbu mgbu m.
Ọ gbawara m obi n'ihi na m nọ na-emekpa m na abụba na kegriiz ntutu. The usọbọ maka ya, m maara na m ga-ahụ n'ụba ọzọ ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ-asa ya ọzọ mgbe mgbe, ma anọghị m n'ebe m nkuchi nne. Ka anya dị ka m chọrọ iri a ịsa ma ọ bụ asa m ntutu isi otú m ga-esi na ya. M tara ahụhụ n'ụlọ n'ihi na enweghị m ike iri a ịsa na m na-emekpa n'ụlọ akwụkwọ n'ihi na m nwere na-eje ije gburugburu na m kegriiz ntutu. M nsogbu na obi ọjọọ n'ihi na ọ na ghọrọ ọbụna ihe na-ejighị n'aka na-ada mbà n'obi na m ugbua ala ùgwù onwe onye.
Ikekwe, ọ bụ m nkuchi nne opsykologiska omume nke ya ogbenye ndabere. Ọ mụtara ịzọpụta na ihe niile. Nke a ịda ogbenye echiche ga-aga na ya ruo ọtụtụ afọ, ọbụna mgbe ọ ọma anya n'ụzọ ego. Ọ kwere enweghị ihe ọ bụla, ma wee banyere na eyi na uwe ochie. O nwere ihe karịrị ego ịzụta ihe ọhụrụ na ọhụrụ, ma ọ dịghị mgbe ọ mere.
Ma ọ bụ, ya agwa m na ya bụ egwu nke m nkuchi nna. Amaghị m, ma o nwere ọtụtụ afọ e ukwu merie ya. Ọ ga-mgbe ụfọdụ na-ekwu unflattering ihe banyere ya na di ya na anyị bụ ụmụ mgbe ọ na-anụ.
Mgbe m na-eche banyere ya, ọ dịghị mgbe ọ dị otú ahụ banyere ya, ma n'aka nke ọzọ, ọ sịrị n'ozuzu mgbe ọ bụla. Enweghị na-ekwu okwu, o nwere ike pụọ ebe ya ala. My nkuchi nne mgbe maara ebe ọ nọ ma ọ bụ mere. Ọ bụrụ na o mere mkpesa na anyị bụ ụmụ, ma ọ dịghị mgbe kwuru na ọ ozugbo na ya. Ọ dịghị mgbe m hụrụ ha na-arụ ụka, ma nke a bụ omume bụ isi iwe. Nkwurịta okwu n'etiti ha bụ kpamkpam nwụrụ anwụ, na ọ bụ nke a na m na-eto na. Ọ dịghị mgbe ị na-ekwu ka ọ bụla ọzọ.
My nkuchi nna na-ese siga a anwụrụ, nke o mere si dị afọ iri na anọ, kama na o nweghị nsogbu na booze. Ọ bụ vodka na ndị ọzọ na-aba n'anya karama na a shelf na pantiri, ma ọ dịghị mgbe na-aṅụ onwe ya nke ha, ma naanị otu ugboro na ọ bụ ndị ọbịa n'ụlọ na ọ na-achụ nta schnapps.
Ma ugbu a, azụ m kegriiz ntutu. M na-anọgidewokwa na-anyụ site na nke a ma ọ maghị isi dozie ya. N'oge ahụ nwoke a obere ogologo ntutu isi, nke m nwere. M chọrọ ntutu m ntị nke mere na ha ga-abụ ihe anya. M nwere ihe karịrị otu ugboro na e ike emegbu maka inwe nnukwu na protruding ntị dị ka m "comrades" na-ama ụra na ha si n'azụ na ha na mkpịsị aka ya mere na ha bụ ndị o doro anya na-acha uhie uhie. Ma n'ihi na m ntutu isi bụ ya mere kegriiz na abụba n'ihi ya, ọ mara mma, ma eyịride lank na jọrọ njọ ala na gburugburu ntị. Oh ihe m na-emekpa m lank ntutu!
Mgbe ọ ghọrọ colder kwupụta ọdịda ihu malitere a German ụmụnne na ụlọ akwụkwọ. A okoro na nwa agbọghọ. Ha kwụpụ na ụgbọ ala na a na-akwụsị m. Ha nwere a obere dị iche iche uwe karịa anyị Swedes ka m chọpụtara na ha. The girl nwere ogologo, ezi braids, nwata ahụ nwere nịịka n'agbanyeghị ihu igwe na-na-colder. Ma ọbụna ha chọrọ nọdụ ọnụ nwa na-enweghị na lank kegriiz ntutu na bọs ụlọ akwụkwọ. M na-echeta na oche ọzọ m bụ ohere iputa ma ha nọdụ n'azụ nke ụgbọ ala. M chere na ọ bụ n'ihi na m na njakịrị, ya mere ha ga-abịa na otu na mih na ha na-eji ike emegbu.
Mgbe m kwuchara nke isii ọkwa, m nwere lousy ratings. M mgbe jisiri ịrụ ọma na Torpa akwụkwọ n'ihi na m mere ka cowed ma megbuo. My obi ike na-ọ bụghị nanị na ẹkenịmde ala na akpụkpọ ụkwụ, ma ọ dịghị. N'ihi na m nwere ike na-esi pụọ m ike emegbu ha, m na-etinye na a dị iche iche na klas n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ebe ha na-agụ a obere ihe leisurely ijeụkwụ. Mgbe ahụ, ọ gara nnọọ nke ọma maka m. M nwetara na nke ọma nọ na klas na ọ bụ onye ọ bụla n'ime ụmụ klas m na-eji ike emegbu m. All ndị enyi, ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-agaghị mmeko ụfọdụ ma ọ bụ wee mara ha.
Anyị nwekwara ụfọdụ kwabatara nọ na klas nke ahụ abụghị nkịtị n'oge ahụ. Otu nke Lebanon, nke bụ afọ abụọ tọọ ndị fọdụrụ n'ime anyị, onye si Turkey na otu onye si Greece. O nweghị mgbe ọ bụla nsogbu ha na ha na ha njakịrị ma ọ bụ onye ọ bụla.
Ka m ga-emecha kwụsị n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na 9 ọkwa, m bụ ọkaibe na klas na nwere 4.7 na nkezi. N'oge ahụ, ha nwere a ise mgbe ọnụ ọgụgụ na ụlọ akwụkwọ. Otu bụ ndị kasị njọ, mgbe ise ebe kasị mma.
Ọ bụ ezie na ọ dịghị onye na klas m onye ike emegbu m otú e nwere ndị ụmụ akwụkwọ si klas ndị ọzọ mere ya. Stefan, a ogologo rickety blond nwata, ya were na ọrụ na-emegbu mmadụ m. Ọ nwere ike na-eti mkpu emo na m niile ụmụ akwụkwọ gburugburu pụrụ ịnụ ya. Ọ bụ ihere na-emenye ihere. Amaghị m ihe m mere o ji mee otú ahụ. Ọ bụ nnọọ otú ahụ. Ọ bụ m otutu na m ọkọnọ onwe m na ya. M nwere si akpa oge toro na ya otú m na-amaghị ihe ọ bụla ọzọ.
Mgbe m ama okokụre ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ bụ ike ịnọgide na emegbu mmadụ m ka anya dị ka ọ hụrụ m ebe ọ bụla. Ọ dịghị mgbe m ghọtara ihe mere o mewere otú ahụ.
M nwere ná ndụ m nwere a ogbenye echiche nke direction. Otu mgbe, mgbe a egwuregwu ụbọchị hazie akwụkwọ ka m ahụghị ụzọ azụ akwụkwọ ahụ ebe ụgbọ ala ga-aga.
Mgbe m okoyo n'okporo ụzọ m zutere ụfọdụ ụmụ akwụkwọ si n'ụlọ akwụkwọ na-aga ije. M kpebiri na m na-ajụ ha maka ntụziaka. Ha ga-hụrụ otú furu efu na-ejighị n'aka na m anya. Fọrọ nke nta ozugbo ha malitere tiis na emegbu mmadụ m n'ihi na m nwere ike ịbụ ụzọ. Ha na-akpọ m "ukwu otutu" nke ha, na-akpọ m na-eme n'ọdịnihu nke akwụkwọ.
Ma ha kwuru na agbanyeghị si nri rktingen na m ga-aga na-esi na ụlọ akwụkwọ. Apụghị m ịghọta ihe mere ha ga-eburu m n'ihi na ahụghị m. Na m ma na o siri ike.